Israa’iil iyo Iran: Ma dagaal ayay u diyaar garoobayaan? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Israa’iil iyo Iran: Ma dagaal ayay u diyaar garoobayaan?
Tani ayaa ah iskudhacii ugu horeeyay ee suuragalin kara dagaal dhexmara Israa’iil iyo Iran, kaasi oo horeseedaya burbur cabsi leh marka loo eego heerkaan casriga ah ee Bariga Dhexe.
Dagaalka ayaa laga yaabaa inuu ku baaho dalalka Suuriya iyo Lubnaan. Magaalooyinka Israa’iil ayaa laga cabsi qabaa in la duqeeyo, maadaama ay bartilmaameed istaraatiiji ah u yihiin Iran.
Bilowga horeba, Ciidammada cirka ee Israa’iil ayay u badan tahay inay isku dhacaaan xoogaga Iran iyo xulafadeeda ee Xisbullah.
Waa colaad u baahan in laga hortago, waqtiga ku haboona uu haatan yahay. Si kastaba Israa’iill iyo Iran ayaa ah kuwa wali uu hardan ka dhaxeeyo.
Israa’iil ayaa muddo dheer ka walaacsaneyd saameynta Iran ay ku leedahay gobolka ee sii kordheysa.
Loolanka oo si tartiib ah ku bilowday ayaa sannado badan soo socday waxa ayna Israa’iil ku dooneysa inay uga hortagto damaca Iran ay ku hormarineyso hubkeeda nuklerka, sida gantaalada ridada dheer iyo maraakiibta qaada lidka diyaaradaha oo Iran ay u dirto kooxda Xizbollah ee ku sugan Lubnaan.
Iran ayaa si weyn uga soo horjeedo dowladda Yahuuda ee Israa’iil waxa ayna muddo dheer taageereysay kooxo xagjir ah oo loogu talgalay in lagu burburiyo.
Bilihii lasoo dhaafay, Israa’iil ayaa sheegtay in laga sameeyay Suuriya kooxo kala duwan o taabacsan Iran, goobo hubka lagu keydiyo, barkoontaroolo, iyo saldhigyo cirka ah.
Maalmo yar uun ka hor, Israa’iil ayaa sheegtay inay duqeysay goobo ay yaaleen gantaallo loo diyaariyay in lagu garaaco.
Balse habeen hore Iran ayaa 20 gantaal la gaftay saldhigyo milatari oo Israa’iil ay ku leedahay buuraha Golen.
Israa’iilna waxa ay sheegtay inay burburisay goobihii laga soo tuuray gantaladaasi.
Bartilmaameedka ayaa ahaa saldhigyo milatri oo Israa’iil ay leedahay balse aysan ahayn goobaha ay ku nool yihiin dadka shacabka.
Wasiirka Israa’iil ee gaashaandhiga Avigdor Lieberman, ayaa xusay in: “Cidina aysan dooneyn in colaadu baahdo- xaqiiqdii cidna ma dooneyso dagaal.”
Wararka qaar ayaa sheegaya in duqeymo ay qaaday Israa’iil kolsii horeysay ay burburiyeen gantalada difaaca hawada Iran ee gudaha Suuriya.
Israa’iil ayaa xiratay khadka cagaaran, waxaana iska cad inaysan ka laaban doonin go’aankeedaasi ay ku difaaceyso hawadeeda.
Dalalka ugu quwada badan caalamka ayaanan wali soo faragalinin labada dhinac ee Israa’iil iyo Iran.
Inta ay arrintu sidaan tahay, ayaana Iran waxa ay u arki doontaa ficilada Israa’iil ifafaalo dheeraad ah oo muujinaya waxa uu damacsan yahay Mareykanka.
Kooxaha taabacsan Iran ayaa horey u weeraray dalxiisayaal u dhashay Israa’iil oo ku sugnaa dibedda iyo ururada yahuuda eek a howlgala Latin America.
Weerar argagixiso oo guuleysta oo noocaan ah ayaa xaalada beddeli kara, waxa uuna ku qasbayaa Israa’iil iyo Iran inay qarka u fuulaan dagaal buuxa oo ka dhex qarxa
← Maraykanka oo sii kordhinaya cadaadiska cunaqabataynta Iiraan
Dowladda oo sheegtay in ay ku dileen Bariirre saraakiil ka tirsanaa ururka Al-shabaab →